जेठ ३० गते २०७६
खाटी बाहुन ( लघु कथा )
तराईमा गर्मी सुरु हुन लागेको थियो । तीस चालीस घरहरु भएको बजार पार गर्दै जादा सानो चिया पसल देखियो । चिया खाने विचारले श्रीकृण्ण शर्मा भित्र पसे । झिगा भन्केका र साहुजीको नाकबाट सिगान निस्केको देखिन्थ्यो । भित्र दुईवटा बेन्चमा चार जना बसिरहेका थिए । शर्मा पनि बेन्चको छेउमा गई बसे । चार जना मध्ये एक जना युवकले उनलाई केही प्रश्नहरु सोधे - काहाँबाट आउनु भएको हो बा ? किन… पुरा पढौ
१ हप्ता हेर्छु, रद्द भए यतैबाट खाडी जान्छु
बाउ शाष्टङ्ग दण्डवत्, आराम छु, आराम चाहन्छु। घर परिवारमा आमा, बहिनी पनि सञ्चै होलान् । भैंसी ब्याउने समय भएको थियो, भैंसी ब्यायो कि नाई ? कि गत वर्षजस्तै भैंसी ब्याउने समयमा पाडो उल्टो परेर भैंसीले संसार त छोडेन ? बाउ, मलाई गत वर्षको याद आउँछ। छोरा बुहारी काठमाडौंमा बसेर लोक सेवाको तयारी गरेका छन्। नाति पनि छ। नाति, छोरा, बुहारीलाई यसो अलिअलि घ्यू खान पाउन भनेर ऋणमाथि भए नि ६०… पुरा पढौ
छुवाछुत र विभेदबारे गगनसिंहको उपन्यास
सुदुर पश्चिमका आख्यानकार गगनसिंह थापाको पाँचौ कृति ूउज्ज्वली ू प्रकाशन हुदैछ । सुदुर पश्चिम नेपालमा रहेको जातिय छुवाछुतमााथि लेखिएको यस लघु उपन्यासमा सामाजिक विभेद र कुसंस्कारको सुन्दर कथानक चित्रण गरिएको छ । लेखकका यस अघि सोह्र सौगात ९ संयुक्त कथा सङ्ग्रह ० र आख्यानहरु कर्णालीको छेउछाउ , मेरो मधुशाला र पू्र्खाको चिट्ठी प्रकाशित छन । पुरा पढौ
शीरमा बसेर फेवा वलात्कृत भएको कसरी हेरौं : त्रिपाठी
सहित्यकार ठाकुरप्रसाद त्रिपाठीको फेवा परिवेशलाई विश्लेषण गरेर लेखेको खण्डकाव्य फेवा मानुसी एक कार्यक्रमका बिच पोखरामा सार्वजनिक भएको छ । कार्यक्रम दिपशिखा साहित्य सङगमको ब्यानरमा आयोजना गरिएको थियो । काब्यकार त्रिपाठीले आफुले बाल्यकालमा देखेको फेवाताल बलतकृत भएको फेवा सिरमा टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकेर आफुले कलम चलाएको धारणा राखेका थिए । गण्डकी प्रदेशका संसद राजिब पाहारी प्रमुख अतिथी रहेको कार्यक्रममा शिक्षासेवी भिम सुबेदीले लेखक त्रिपाठी ब्यक्तित्व परिचय गराएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन… पुरा पढौ
भेषराजले दराजभित्र हेरे, ओछ्यानमा हेरे, वल्लोपल्लो कोठातिर हेरे तर कतै पनि घडी फेला परेन । उनले सम्झने कोसिस गरे, टेबलको घर्रा पटकपटक खोले । खोज्दाखोज्दा आजित भएपछि श्रीमती र छोरालाई हराएको ठाउँ देखाउँदै भने, “नुहाउँदा यहीं राखेको थिएँ, अहिले छैन ।” भेषराजलाई मिटिङमा जान हतार भइरहेको थियो । उनी यत्तिकै त्यतैतिर लागे । “तीन वर्षदेखि व्याट्री पनि नफेरेको, रंग पनि नउडेकोे, अहिले बुच्चै देखियो ।” उनी नीलडाम परेको नाडी हेरेर… पुरा पढौ
खुल्यो राजुको ‘दिमागको बिर्को’
कथाकार राजु क्षत्री ‘अपुरो’को लघुकथा संग्रह ‘दिमागको बिर्को’ लोकार्पण भएको छ । लोकार्पण गर्दै गण्डकी प्रदेश सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले प्रदेश सरकारले साहित्यमा चासो दिने बताइन् । स्वतन्त्र पत्रकार सघं कास्की अध्यक्ष असफल गौतमले स्रष्टा परिचय दिएको कार्यक्रममा वडा सचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेल, साहित्यकार मदन भण्डारी, विष्णु बास्तोला, पदम नेपाली र खिमकुमारी भण्डारीले लघुकथा समय सान्दर्भिक भएको बताएका थिए । हेमजा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष छन्दमणि… पुरा पढौ
सुश्री हरिकलाकी ‘छोरी’ सार्वजनिक
अढाइ दशक शिक्षणमा बिताएकी हरिकला गुरुङको परिचय थपिएको छ ः उपन्यासकार । उनको उपन्यास छोरी शनिबार सार्वजनिक भएको छ । अविवाहित हरिकलाले आफ्नो पहिलो कृतिलाई छोरी नाम दिएकी छन् । आँटीघर पैगीलामा समाजले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रमा उपन्यास सार्वजनिक गरियो । हरिकलाले उपन्यासमा आफूले समाजको चित्रण गर्न खोजेको बताइन् । उनले पाठकको सुझावलाई मध्यनजर गरी अघि बढ्ने बताइन् । साहित्यकार एलबी थापाले नेपाली समाजमा नारीबारे विरोधाभाष रहेको बताए । उनले… पुरा पढौ
कविता : जंगबहादुर
यतिबेला कसैले नपढे हुन्छजंगबहादुर मरेको झुठो इतिहास। जंगबहादुर प्रत्येक अखबारहरुमार्फत टेलिभिजनहरुमार्फत हाम्रालागि प्रत्येक दिनआदेशहरु जारी गरिरहेकाछन् ।प्रत्येक दिन हामी सबै जंगबहादुरको आदेश छातीमा टाँगेर हिडिरहेका छौँ । आफ्नो प्रिय घोडा चढेरप्रत्येक दिन जंग बहादुरउही सान सौगातका साथउसैगरी आफ्नो सवारी चलाउछन राजधानीका सडकहरुमा । जंग बहादुर संगसंगै उनको पुरानो घोडा पनि जिवित छ बालबच्चा बुढापाका सबैले देख्नेगरी हिन्हिनाउदै कराउछ पहिल्यैजसरी ।जंग बहादुर सवार घोडा हाम्रा पू्र्खाहरु कोपरेका दाँतहरु बोकेर सान सौगातका साथ हिडिरहेकै छ हाम्रो बस्तीमा । जंगबहादुरको घोडाजब हिन्हिनाउछ बस्तीको… पुरा पढौ
‘बिक्नै छाडे, अब के गर्ने होला ?’ छेवाङले निगालोको भारी आँगनमा फाले । छेवाङको पिँढी डोको र नाङ्लोले भरियो । तर किन्ने मान्छे आएनन् । निगाले गाउँका धेरैजसो सहर पसेकाले उनको डोकोनाङ्लो, थुन्चे बिक्न छाडे । उनले जानेको सीप डोकोनाङ्लो बुन्ने नै हो । यही बेचेर परिवारलाई खानलाउन पु¥याउँथे । कक्षा ९ पुगेका छेडुपको स्कुल खर्च पनि पुग्थ्यो । ‘छेडुप, डोको त १०० वटा पुगिसेकछ, नाङ्लो पनि २० वटा भएछ,… पुरा पढौ
कृष्ण सेन इच्छुकका चर्चित २ कविता
जेल म पर्खालभित्र छुतिमी पर्खालबाहिर छौम पहराभित्र छु, तिमी पहराबाहिर छौम यातना–गृहमा छुतिमी खुल्ला शिविरमा छौसिकारीले बाँधेको छाँद होस्अथवा त्यो उसको फाँद होस्के फरक पर्‍यो र?मित्र, अर्काको मुठ्ठीभित्र पराधीन जिन्दगीजहाँ काटनु परे पनि त्यो जेल हुन्छ।जहाँ जीवन बन्धनहरूभित्र कैद हुन्छजहाँ सुन्दर सपना सधैँ अवैध हुन्छजहाँ मुक्त आकाङ्क्षाहरू बन्देज हुन्छन्जहाँ हार्दिक भावहरूमा ठेस लाग्छअनि जहाँ बासी हावा बहने दुर्गन्धमा पनिनिर्धक्क सास फेर्न प्रतिबन्ध हुन्छबन्दुकको पहरा होस्अथवा त्यो कानुनको घेरा होस्के फरक… पुरा पढौ